Prof. Cali Khaliif Galeyr oo beeniyay inuu yahay shaqsi xil-doon ka ah Somaliland (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Prof. Cali Khaliif Galeyr oo beeniyay inuu yahay shaqsi xil-doon ka ah Somaliland (DHAGEYSO)
Madaxweynaha maamulka Khaatumo Prof. Cali Khaliif Galeyr ayaa sheegay in xilligaan aanu dooneyn inuu noqdo madaxweynaha maamulka Somaliland, wasiir ka tirsan maamulkaasi ama taliye ciidan.
Prof. Cali Khaliif Galeyr ayaa hadalkaan sheegay mar uu beeninayey inuu yahay shaqsi xil doon ah, islamarkaana wada-hadalka uu la galaayo Somaliland uu xil ku raadinayo.
“Wax magaalada Hargeysa yaalla oo aan aniga Cali ahaan ama intaan xukuumadda ku wada nahay oo ay u hunguryoonayaan ma jiraan, madaxweynaheedaan ku qanceyn, wasiirkeedaan ku qanceyn, ciidamadeeda xukun baan ku qanceyn” Sidaasi waxaa yiri madaxweynaha maamulka Khaatumo Prof. Cali Khaliif Galeyr.
Sidoo kale, madaxweynaha Khaatumo Prof. Cali Khaliif Galeyr ayaa sheegay in been abuur ay tahay wararka sheegaya inuu burburay wada-hadalladii ay kula jireen maamulka Somaliland ee ka socday dalka Jabuuti, isagoo sheegay in wada-hadalladaasi ay dib u furmayaan.
Ugu dambeyn, Prof. Cali Khaliif Galeyr ayaa sheegay in wada-hadallada ay kula jiraan maamulka Somaliland aysan ka keeni doonin guul-darro, ayna soo qaadi doonaan wax ay ku qancaan shacabka deggan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn.